बारेमा प्रेम उपन्यास, लिखित कविता र चित्रित तस्वीर धेरै बनेको छ। idolizing र मान्नेहरूले condemning र interfering हरेक तरिकामा तिनीहरूलाई मदत, विभिन्न प्रसङ्गहरू बोलिएका प्रेम बारेमा। तर प्रेम फरक छ। रोचक तपाईं बताउने यो platonic प्रेम के अर्थ हुनेछ जानकारी हुन सक्छ।
प्रेम - यो सबैको अनुभव कि भावना छ। देश र सामान्य प्रजा लागि, आमा र परिवार को प्रेम: यो फरक हुन सक्छ। तर सबैको जीवनमा एउटा विशेष स्थान विपरीत प्रेम लिन्छ सेक्स, व्यक्ति सबै कठिनाइ सहन र संग्रामहरू जीतेको मनाउन सुख र चिन्ता, साझेदारी गर्न कोसँग तपाईं सँगै त प्रत्येक दोस्रो हुन चाहनुहुन्छ। तर बाहिर, त्यहाँ पनि "platonic प्रेम" को अवधारणा छ। यो बन्द शारीरिक सम्पर्क समावेश गर्दैन एक भावना हो, यो आफ्नो सबै महिमा मा सम्बन्ध को रोमान्स र शुद्धता छ।
को अवधारणा को मूल मा
प्रत्येक अवधारणा यसको मूल, सुरु बिन्दु छ। कुनै अपवाद र "platonic प्रेम" को अवधारणा छ। यो प्लेटो रूपमा, बुद्धिमान् मानिसको जीवन समयमा खडा गर्ने एक शब्द छ। उहाँले, खैर, यसको संस्थापक छ, पहिलो आफ्नो प्रसिद्ध treatise "भोज" मा platonic प्रेम बारे बताए। यो शब्द एउटा शारीरिक सम्पर्क आवश्यक गर्दैन, सफा, आदर्श प्रेम को लागि व्याख्या रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो दुई मान्छे, छैन कामवासना र फोहोर विचार गरेर darkened बीच घनिष्ठ आध्यात्मिक affinity छ। यसले बल र सिर्जना गर्न र सुन्दर कुरा सिर्जना गर्न इच्छा छ, एक व्यक्ति राम्रो हुन चाहँदा मन को एक उदात्त राज्य हो। - अक्सर संसारको masterpieces सिर्जना धन्यवाद पनि शारीरिक सम्पर्क हुन सकेन जो संगीत को मदद, बस यस्तो भावना कविता, कविता, चित्रहरू: कुनै पनि कला मा platonic प्रेम प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
आज, मिति यस्तो कुरा रूपमा platonic प्रेमको एक सानो। यो भावना जीवनको यो चरण मा अधिकांश मानिसहरू धेरै प्रयोग हुन पर्छ जो यस्तो थ्रोब्याक अनावश्यक कुरा, मानिन्छ। ठीक छ, आधुनिक संसारमा एकदम व्यावहारिक छ, र कुनै ठाउँ selflessness अक्सर छ। हामी platonic प्रेम कुरा भने, यो यस्तो सम्बन्ध मा एक "अनौठो प्रेम" को रूपमा कुनै यस्तो कुरा हो कि उल्लेख गर्न सकिन्छ। शिक्षक र विद्यार्थीको घनिष्ठ सम्बन्ध यस अवस्थामा सार्वजनिक, को platonic प्रेम निन्दा भने - दुख्छ भनेर छैन, र पनि अधिक दुवै पक्ष लागि राम्रो हुनेछ एक भावना हो। शिक्षक प्रेम झर्ने, विद्यार्थीलाई, खडा गर्न, राम्रो बन्न कठिन अध्ययन गर्न खोज्छ। शिक्षक बुबाको, प्रेम Mentoring संग थप बताउन सक्नुहुन्छ यस्तो विद्यार्थी छ। Platonic पनि एक व्यक्ति फिर्ती आशा गर्छ जब, देश प्रेम, तर बस disinterested प्रेम छ र आफ्नो प्रशंसा को वस्तु लागि राम्रो कुरा गर्न खोज्छ।
यो, वर्तमान आपसी र शारीरिक प्रेम गर्न ठूलो, व्यापक सडक मा मात्र पहिलो कदम हो - एक platonic प्रेम गर्दा तर परिस्थिति हो। यस्तो सम्बन्ध एक जीवनकालमा पछिल्लो मानिसहरूलाई विवाह बाँधिएका छन्, धेरै बलियो अक्सर छन्। र केवल आफ्नो platonic प्रेम को यो व्याख्या मा उसले धेरै कुरा मा बढ्न अधिकार छ। अन्य अवस्थामा हुनत यो अझै पनि शुद्ध र प्राचीन platonic प्रेम रहिरहन्छ।
कसरी मान्छे भेट्न प्रस्तावित गर्न? निर्णय - र यसको लागि जाने!
मित्रता के हो
तपाईं कुराकानी गर्न चाहेको उन्मूलन गर्न आवश्यक छ कि 10 बानी
गोप्य, कसरी आफ्नो जन्मदिनमा मूल प्रेमिकालाई शुभकामना दिइयो, खुला छ
दुश्मनी - यो केवल मन परेन छ?